Igama lesiqhelo: ialuminiyam hayidroksayidi, nemagniziyam hayidroksayidi, kunye simethicone (a LOO mi num hye DROX ide, mag NEE ukubona um hye DROX ide, kwaye sye METH i kone)
Igama lebrand: IAlmacone, iGelusil, iMag-al kunye neMi-Acid, iMilantex, iMintox, iMylanta Maximum Strength, iRulox
Udidi lweziyobisi: IiAntacids
NguMedical, Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngo-Matshi 30, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
I-Gelusil liyeza elidibeneyo lokunyanga isilungulela , asidi ukuqunjelwa , isisu esimoshakele , ukudumba kubangelwa yirhasi, okanye ukungonwabi esiswini okubangelwa kukutya okanye ukusela kakhulu.
iintlungu kwicala lasekunene phantsi kwembambo
I-Gelusil inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Eli yeza linokwenza ukuba kubenzima emzimbeni wakho ukufunxa amanye amayeza, ngakumbi aqinisekileyo iyeza lokubulala iintsholongwane . Gwema ukuthatha naliphi na iyeza kwiiyure ezimbini ngaphambi okanye kwiiyure ezimbini emva kokuba uthathe iGelusil.
Akufanele ulisebenzise eli yeza xa uxabisa Aluminium hayidroksayidi , wemagniziyam hayidroksayidi , okanye simethicone .
isifo sezintso; okanye
Ngaba amaqanda abangela irhasi
ukuba unokutya okusezantsi kwemagniziyam.
Musa ukunika eli yeza kumntwana ongaphantsi kweminyaka eyi-12 ngaphandle kwengcebiso yezonyango.
Ndingayithatha njani iGelusil?
Kufuneka uyihlafune ipilisi ehlafunwayo phambi kokuba uyiginye.
Shukumisa i ukunqunyanyiswa ngomlomo (ulwelo) ngaphambi kokuba ulinganise idosi. Sebenzisa ikomityi yedosi enikiweyo, okanye sebenzisa isixhobo sokulinganisa idosi (hayi icephe ekhitshini).
uyithenga phi i-viagra qhagamshela i-usa
Musa ukuthatha ngaphezulu kwedosi ephezulu ecetyiswayo kwileyibhile yamayeza. Musa ukuwathatha la mayeza ngeedosi eziphezulu ngaphezulu kweeveki ezi-2 zilandelelana.
I-antacid ihlala ithathwa ixesha elincinci kude kube kucacile ukuba iimpawu zakho zicacile. Biza ugqirha wakho ukuba iimpawu zakho aziphuculanga kwiiveki ezi-2 zokuthatha eli yeza.
Gcina kubushushu begumbi kude nobushushu kunye nobushushu. Musa ukuvumela amayeza alulwelo ukuba abe ngumkhenkce.
Kuba iGelusil isetyenziswa xa ifuneka, usenokungabikho kwishedyuli yokulinganisa. Tsiba nayiphi na idosi ephosiweyo ukuba phantse lixesha ledosi yakho elandelayo. Sukusebenzisa amanani amabini ngexesha elinye.
Ngaba ropinirole uya kukuphakamisa
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndithatha iGelusil?
Eli yeza linokwenza kube nzima kumzimba wakho ukufunxa amanye amayeza, ngakumbi amayeza athile okubulala iintsholongwane. Gwema ukuthatha naliphi na iyeza kwiiyure ezimbini ngaphambi okanye kwiiyure ezimbini emva kokuba uthathe iGelusil.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeGelusil
intlungu yethambo, ubuthathaka bemisipha;
ukudideka, utshintsho kwimeko yakho yengqondo, ukuxhuzula (ukuxhuzula); okanye
ulusu olukhanyayo, uziva ukhaphukhaphu okanye uphefumla kancinci, ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho kakhulu zinokubakho, kwaye awunakho kwaphela.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela iGelusil?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-Gelusil, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Unyango lwe-iritis amathontsi wamehlo
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 3.01.
ujonge njani kwimbali yokukhangela
Ixabiso lehydrocodone acetaminophen 5 325
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-flovent
I-losartan potassium 50 mg ithebhu
I-pin x ithebhulethi ehlafunwayo
Utshintsha njani ioyile
i-flonase vs. i-nasacort